१८ व’र्षीय किशोरको ब’यान : दाजु विदेशमा, घरमा सबै सुते’पछि भाउजु आउनुहुन्थ्यो, बच्चा होला भन्ने थाहा थिएन ! – Dailny NpNews
१८ व’र्षीय किशोरको ब’यान : दाजु विदेशमा, घरमा सबै सुते’पछि भाउजु आउनुहुन्थ्यो, बच्चा होला भन्ने थाहा थिएन !
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ३१, २०७८ समय: १६:२२:२८
आमालाई जस्तो सम्मान गर्नुपर्ने आफ्नै भाउजु देवरबाट ग’र्भवती भइन् । त्योपनि दाजु विदेश गएका बेला । घटनाले त्यति बेला पुष्टि पायो जतिबेला भाउजुको पेटमा हुर्किदै गएको बच्चा बढेर पेटको आकारमा बृ’द्धि भयो । प्राप्त जानकारी अनुशार कैलालीको लम्कीमा एक १८ व’र्षीय देवरले भाउजुलाई गर्भवती बनाएका हुन्।